Open Source ဆိုသည်မှာ — MYSTERY ZILLION
Open Source ဆိုသည်မှာ
February 2010 edited April 2011 in Open Source
Open Source ဆိုတာ သူက ကုဒ်တွေ အလကားဖြန့်တာမဟုတ်လား
ကုဒ်တွေကို ဘယ် Language နဲ့ပြန်ပြင်ရတာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
eyeos က open source ဆိုလို့ဒေါင်းကြည့်တာ သူရဲ့ဖောင့်မန်တွေက .eyecodes ဆိုတာတွေချည်ပဲဗျ
notepad++ နဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကုန်လုံးက php နဲ့ရေးထားတာပါ။ .eyecodes ဆိုတာကလည်း php နဲ့ရေးထားတာပါ။ eyeos ရဲ့ အချို့ function တွေကိုတော့ ယူသုံးထားမှာပါ။
တခြား open source ဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုလဲ notepad++ နဲ့ပြင်ရမှာပေါ့
ကျနော် ကတော့ open source ရဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားဘီဗျ။iphone က winterboard theme တွေကို ကလိ ရင်းနဲ့သိသွားတာဗျ။
Oop!!! no... opensource mean giveasource. If .NET project giveaopensource, you must open with Visual Studio. Opensource is just release source code.
အဓိကမှတ်သားသင့်သည့် အချက်မှာ opensource software ဆိုသည်မှာ "အလကားရသည့်  (free)" software ဟု ယူဆသည်ထက် "လွပ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ရသည့် (freedom)"  software ဟု ပြောမှ ပိုမိုမှန်ကန်သည် ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Open source လိုင်စင်များအကြောင်းသိချင်ပါသည်..
GPL, LGPL လိုင်စင်များအကြောင်းကို အထူးသဖြင့်သိချင်ပါသည်။
Linux Kernel ပေါ်တွင် ရေးသားသော application များသည် open source ပေးရန်လိုပါသလား။
Open source compiler ဖြင့် ရေးသားသော application များသည် proprietary အနေဖြင့် ရောင်းလို့ရနိုင်ပါသလား